Tenisy – «Afrique U18»: hiatrika fifaninanana any Egypta i Tsantaniony | NewsMada
Tenisy – «Afrique U18»: hiatrika fifaninanana any Egypta i Tsantaniony
Mbola tsy manana isa fa aotra ny ao anatin’ny kaonteran’i Tsantaniony, ankehitriny. Noho izany, handeha hanatrika fifanintsanana “circuit mondial”, hakana isa atsy Afrika ny tovovavy, ho an’ny sokajy U18. Handray anjara amina fifaninanana telo izy raha ny fandaharam-potoana, nambaran’ny federasiona. Hisy ny atsy Afrika Atsimo, ary avy eo hihazo an’i Egypta indray izy , ka ankoatra ny fifaninanana mbola handray anjara amin’ny fiofanana omen’ny federasiona iraisam-pirenena, ihany koa i Tsantaniony.
Manana fikasana ihany koa ny federasiona vaovao, tarihin-dRakotondrainibe Stéphane, ny hampiantrano ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy U12, U14, U16, U18 ary ny amboara Davis, sokajy fahatelo, ho an’ny taona 2018. Etsy ankilany, nanamafy ny fandraisany anjara amin’ny fiadiana ny ho tompondaka isan-tarika sokajy zandriny U12 i Madagasikara, izay hatao any Casablanca Maraoka, ny 10 ka hatramin’ny 12 septambra izao. Hiatrika izany i Johny sy Hugo ary Mahefa eo amin’ny lehilahy ary i Miotisoa sy i Maholy ary i Randy, eo amin’ny vehivavy.
Lelavola be ny loka
Ho an’ny eto an-toerana, hanomboka ny 7 ka hatramin’ny 20 aogositra ho avy izao, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja tenisy. Fihaonana hotanterahina eo amin’ny kianja ACSA Ambohidahy. Nambaran-dRakondranibe Stephane, filohan’ny federasiona fa lelavola hatrany amin’ny 3.800.000 Ar no hozaraina, miampy amboara sy medaly. Handray anjara amin’izany ireo ligim-paritra fito dia Analamanga, Boeny, Vakinankaratra, Antsinanana, Matsiatra Ambony, Atsimo Andrefana, Amoron’i Mania. Nohamafisin’ny filohan’ny federasiona fa noraisin’izy ireo avokoa ny 75 isan-jaton’ny vesatra, tamin’ny fifaninanana, nataon’ireo ligim-paritra rehetra.
Farany, niova ny endriky ny sary famantarana ny federasiona malagasin’ny tenisy.